I-Portside: indlu entle kunye negadi - I-Airbnb
I-Portside: indlu entle kunye negadi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSummer
Indlu entle, esandul 'ukulungiswa kunye negadi, zombini ezibonakala kakuhle ngee-degree eziyi-180 zeBallycwagen Bay, i-pier & Ballycwagen Lighthouse.
Paka imoto yakho uze uhambe kuyo yonke iBallyc efumaneka kuyo yonke into equka: iCliff Walk emangalisayo; ibhotile yesikhululo sesikhephe esiyi-RNLI, iLighthouse Tours, ukuloba/ukhenketho lolwandle olunzulu, ukuhamba ngephenyane nokuqubha; zonke iibhari, iivenkile zokutyela neevenkile zokutyela; iSilver Strand; kunye necawa, yeendwendwe zomtshato.
Umgama omfutshane ngemoto yiBallymaloe Cookery School, iGaryvoe Strand neJameson Distillery.
Le ndlu iqaqambile ibe amagumbi amaninzi anezinto ezimbini.
Ifudumele, inesitovu esihle kwigumbi lokuhlala lezo ntsuku zasebusika zasendle. Ngaphandle kwamathandabuzo, indawo yokutyela ekhitshini, yifestile enkulu ibe umnyango onamagqabi amaninzi, nto leyo eyenza ukwazi ukubona iBallycwagen Bay, nto leyo ekwenza ukwazi ukuyonwabela. Le ndlu ineegadi ezingena ilanga ukuya ngaphambili nangasemva, indawo yokugqibela ejonge i-pier yindawo entle yokuthatha inxaxheba kwicebiso elithandwayo ngorhatya wasehlotyeni.
Ukuba uza kuhlala ngexesha leeholide zesikolo, mhlawumbi ndiza kuhlala kufutshane naseCois Cuain, ikhaya lethu lentsapho. Ndingasoloko ndifumaneka efowunini okanye kwi-imeyile yam, kwaye ndinentsapho ehlala kwilali ukuba uncedo luyafuneka xa ndingekho eBallycwagen.
Ukuba uza kuhlala ngexesha leeholide zesikolo, mhlawumbi ndiza kuhlala kufutshane naseCois Cuain, ikhaya lethu lentsapho. Ndingasoloko ndifumaneka efowunini okanye kwi-imeyile yam,…